HIFARANA ANIO NY FANATERANA DOSIE : Hisy fifidianana manokana ireo Kaominina tsy misy kandida
Araka ny tetiandro nofaritan’ny fitondram-panjakana ho an’ny fifidianana ben’ny tanana dia anio 12 septambra no hifarana ny fanaterana ny antota-taratasy filatsaha-kofidiana ho an’ireo kandidà ben’ny tanana. 12 septembre 2019
Manodidina ny tapa-bolana ny fe-potoana nananan’ireo rehetra maniry hitantana ny Kaominina sy ireo te ho lasa mpanolo-tsain’ny Kaominina hikarakara ny dosieny. Narisarisa tanteraka anefa ireo kandida tamin’izay fanaterana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany izay teny anivon’ny Ovec. Tamin’ny herinandro voalohany dia azo isaina amin’ny ratsan-tanana ireo tonga nanatitra ny dosieny ary saika mbola manontany amin’ny antsipiran’ny taratasy ilaina ny ankamaroan’izy ireo.
Tamin’ireo fifidianana roa nifandimby teo aloha dia fanaon’ireo kandida hatrany ny miandriandry aty aoriana vao manatitra izay antontan-taratasy filatsahan-kofidiany izay fa tamin’ity fifidianana ben’ny tanàna ity no tena nanaitra ny fahalainan’ireo maniry hilatsa-kofidiana. Roa andro mialohan’ny hikatonan’ny fandraisana ny dosien’izy ireo dia mbola tsy nisy afa-tsy 47 monja ireo kandida tonga nanatona ny Ovec raha ho an’ny tato anatin’ny Faritra Analamanga manokana. Mahatratra an-jatony anefa ireo Kaominina mandrafitra ity Faritra ity ary misy aza ireo tsy mbola misy mpilatsa-kofidiana mihitsy na iray aza tamin’ny fotoana farany nahazoana vaovao teo anivon’ny Céni.
Hisy fifidianana manokana
Na izany aza anefa dia mbola tsy nisy ny fanapahan-kevitra hatreto ny amin’ny hanemorana na tsia an’io daty efa voatondro io. Raha ny fepetra noraisin’ny Céni dia fantatra fa hanaovana fifidianana manokana na “élection partielle” ireo Kaominina tsy manana kandida ben’ny tanàna mandra pahatongan’ny andro anio. Marihana fa efa nisy ny fanapahan-kevitra noraisana mba hanampiana an’ireo kandida amin’izay fikarakarana dosie izay. Nihevitra ny teo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa anisany antony mampitarozaka ny fanateran’izy ireo ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ny fahasarotana eo amin’ny fikarakarana ny taratasy sasany.
Manoloana izany dia efa nanome baiko ireo sampan-draharaham-panjakana rehetra mifandraika amin’ny fikarakarana dosie ny Céni mba hisokatra mandrakariva. Nandray fepetra ihany koa ny Céni fa azo atao eo anivon’ny Kaominina ihany ny fanamarinan-tsonian’ireo dosie raha toa ka tsy maintsy ilaina ny lehiben’ny Distrika izany teo aloha. Ankoatr’ireo dia nomena alalana ireo kandida hanatitra ny dosieny na mbola tsy feno aza saingy kosa misy ny fe-potoana telo andro tsy maintsy hamenoana izany. Ireo no fepetra noraisana mba hanampiana ireo olom-pirenena maniry hilatsaka ben’ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Nanao antso avo hatrany ireo tompon’andraikitry ny Ovec mba tsy hiandry ora farany ny kandida saingy heverina fa amin’ity anio ity vao hanao totoafo ny fahatongavan’ireo kandida manatitra izay antotan-taratasy filatsahan-kofidiany izay eny anivon’ny Ovec.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68199) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (345) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (228) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (195) 18 février 2020